ShweMinThar: `Loy Krathong´
လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်က တန်ဆောင်တိုင်လပြည့်မှာတော့ ကျမတယောက် “ဇင်းမယ်”ဆိုတဲ့… ညိုတဲ့…မြို့ကလေးမှာပေါ့..။ထိုင်းလူမျိုးတို့ရဲ့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲက ကျမကို ၀တ္ထ္ထ္ထုလေးတပုဒ်ပေးခဲ့တာ။သူတို့ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲက ထိုင်းလို “လွိုင်ကထုံ”….တဲ့……..။
တောင်ညိုညို ပတ်လည်ဝန်းရံတဲ့ “ဇင်းမယ်” မြို့ကလေးရဲ့ အလှဆုံးအချိန်နဲ့ နေလို့ထိုင်လို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ဟာ ဆောင်းဦးပေါက်ချိန်လို့ ကျွန်မက ထင်တယ်။ နိုဝင်ဘာလဆန်းပေါ့။ စိမ့်စိမ့်လေး အေးမြနေတဲ့ ရာသီဥတုနဲ့အတူ ပန်းတွေကလည်း ပွင့်ကြပြီ။ မနက်စောစောဆိုရင် တောင်ညိုညိုတွေကို လွှမ်းခြုံရစ်သိုင်းထားတဲ့ ငွေနှင်းမှုံပြာပြာဟာ တကယ့်ကို လွမ်းစရာ ….။ ကြည့်လို့ကိုပဲ မ၀နိုင်ပါဘူး။
ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ် ၀န်းကျင်က လမ်းကလေးတွေက အေးချမ်းတိတ်ဆိတ်ပြီး လမ်းလျှောက်လို့ ကောင်းတယ်။ တွေးလို့ ငေးလို့လည်း ကောင်းတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်း လမ်းဘေးသစ်ပင်အုပ်ဆီ က ချိုးကူသံ နွဲ့နွဲ့က ကျွန်မကို အိမ်ပြန်ချင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။
ဆောင်းဦးပေါက်တာနဲ့ သူတို့ရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံပွဲတော်တွေကလည်း လာတော့မယ်။ ပန်းပွဲတော်၊ အစားအသောက်ပွဲတော်၊ ပိုးထည်ပွဲတော်၊ ချည်ထည်ပွဲတော်၊ စဉ့်ပွဲတော်၊ ကြွေပွဲတော်၊ ပျော်စရာကောင်းပြီး ချစ်စရာ၊ စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ကောင်းတဲ့ များစွာသော ပွဲတော်တွေ၊ လာတော့မယ်။
ကျွန်မအလွန်သဘောကျတဲ့ ဆန်းဒေးဝေါ့(ခ်) (Sunday Walk)။ ဇင်းမယ်ရဲ့ ထပ်ဖေဂိတ်တံခါးအနီး က ရိုးရာပစ္စည်း၊ ရိုးရာအစားအစာ၊ ရိုးရာအဆိုအကတွေနဲ့ တနင်္ဂနွေညဈေးဟာလည်း ဆောင်းဦးပေါက် တနင်္ဂနွေညတွေကမှ ပိုပြီး အသက်ဝင်နေသလို ပိုပြီး ပျော်စရာ ကောင်းနေသလိုပဲ။
ကျွန်မ အခန်းမျက်နှာစာ မှန်ချပ်ရှည်ကြီးတွေကနေ လှမ်းမျှော်ကြည့်လိုက်ရင် ဇင်းမယ်မြို့ရဲ့ နာမည် ကြီး ဆူပါမားကက် “စင်ထရယ်ဆူပါးမားကက်” (Central Super Market) ကြီးကို မြင်နေရတယ်။ သူတို့ အင်္ဂလိပ်အသံထွက်နဲ့ “စန်ထန်း” ဆူပါမားကက်ပေါ့။ ကျွန်မတို့တောင်မှ လိုက်ပြီး နောက်ပြောင်ခေါ်ရင်း တက္ကစီစီးတဲ့အခါ ကားဆရာကို ပြောရင်းနဲ့ “စန်ထန်း” လို့ပဲ နှုတ်ကျိုးနေခဲ့ပြီ။
ညိုမှိုင်းမှိုင်းရောင် “စန်ထန်း” ကို ကျွန်မက ချစ်တယ်။ ခင်လည်းခင်တယ်။ မနက် Breakfast အချိန် တိုင်းလည်း လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း “စန်ထန်း” ကို အမြဲမြင်ရတယ်။ ကျွန်မလိုအပ်သမျှ အစား အသောက် ၊ အ၀တ်အထည်၊ ဘာညာ မှန်သမျှ ၀ယ်ချင်တော့လည်း “စန်ထန်း”ပဲ။ ကျွန်မ ရုပ်ရှင်ကြည့် နေကျ နေရာကလည်း “စန်ထန်း”ပဲ။ တစ်ခါတလေ အခန်းထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန်သလို ဖြစ်လာရင် ဖြတ်ဆို ထပြီး ကျွန်မသွားမိတာကလည်း “စန်ထန်း” ပဲ ဆိုတော့ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ "စန်ထန်း"ကို ချစ်ခင်စွဲလမ်းမိပါပြီ။"စန်ထန်း"မှာကျွန်မ စွဲလမ်း တာလေးတစ်ခု ရှိသေးတယ်။ “စန်ထန်း” ရဲ့ အောက်ဆုံးထပ် ရိုးရာအ၀တ်အထည်တွေ၊ ရိုးရာပစ္စည်းတွေ သီးသန့်ရောင်းတဲ့ နေရာက စားသောက်ဆိုင်လေးပေါ့။ ထိုင်းအစားအစာချည်း ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလေးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်က ရိုးရာအကနဲ့ ရိုးရာဂီတကို အမြဲဖျော်ဖြေနေတာပဲ။ ရှည်မျောမျော ဆိုင်နေရာ လေးရဲ့ ထိပ်မှာ စင်မြင့်လေး ရှိတယ်။ အဲဒီစင်မြင့်လေးပေါ်မှာ ဂီတနဲ့ အကအဖွဲ့လေးတစ်ဖွဲ့ အမြဲရှိတယ်။ အစားအသောက်က ကျွန်မအတွက် ဒီလောက်ကောင်းတာ မဟုတ်ပေမဲ့ သူတို့ ဂီတကတော့ ကျွန်မကို အလွန် ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဇင်းမယ်မြို့ရဲ့ မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ‘လာနား’ ဆိုတဲ့ အရပ်က ဂီတသံတဲ့။ တူရိယာပစ္စည်းတွေက ကျွန်မတို့နဲ့ အတူတူပဲ၊ ယဉ်ကျေးမှုချင်းလည်း ကူးလူးဆက်ဆံခဲ့ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ရေ၊ မြေ၊ လေ၊ အငွေ့အသက်ရနံ့တွေက မတူကြလေတော့ဂီတသံက ကွာခြားသွားတော့တာပေါ့။
ဘာရယ်လို့မသိ၊ “လာနား” ဂီတသံကို ကျွန်မကြိုက်တယ်။ ဆိုင်ကလေးနဲ့ သစ်သား ကြမ်းပြင်ပေါ်က အ၀တ်ထိုင်ခုံလေးတွေပေါ်မှာ မြန်မာလို သက်တောင့် သက်သာထိုင်ရင်း “လာနား” ဂီတ သံလေးနဲ့ ထမင်းစားရတဲ့ အရသာကို ကျွန်မအလွန်သဘောကျပါတယ်။
“စန်ထန်း” ရဲ့ နောက်ပေါက်ကနေ၀င်ရင် ဒီဆိုင်လေးနဲ့က နီးနီးလေးရယ်။ အဲဒီ “စန်ထန်း”ရဲ့ နောက်ပေါက်ကို လမ်းလျှောက်သွားလို့ရတဲ့ ဖြတ်လမ်းကလေး တစ်ခုကိုလည်း ကျွန်မကရှာဖွေတွေ့ရှိထား သေးတာ …။ ဖြတ်လမ်းကလေးကမှ တကယ့်ကို လှပငြိမ်းသက်အေးချမ်းတဲ့ဖြတ်လမ်းလေး။ ကျွန်မအခန်း က ဆင်းပြီး လမ်းကိုဖြတ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီဖြတ်လမ်းလေးကိုရောက်ပြီ။ လမ်းကလေးရဲ့ ဘေးဝဲယာက အိမ် တွေဟာ သိပ်ကို ချစ်စရာကောင်းပြီး ပန်းပင်တွေ၊ သစ်ပင်တွေနဲ့ အုံ့ဆိုင်းနေတာပဲ။ လမ်းကလေးပေါ်မှာ ဖွားဘက်တော် ပွင့်ဖတ်ပန်းရောင်တွေ၊ ပွင့်ဖတ်အဖြူတွေ၊ ပွင့်ဖတ်အ၀ါတွေဟာ တသဲသဲကြွေလို့ …။ လွမ်း စရာပန်းခင်းလမ်းကလေးပေါ်မှာ ကျွန်မလျှောက်ပြီဆိုရင် အိမ်ကိုသိပ်လွမ်းတာပဲ။
… လမ်းကလေးပေါ်မှာ ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းရယ်လေ … ။
အခုဆိုရင် ကျွန်မတစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်နိုဝင်ဘာလနှစ်ရက်နေ့ကပဲ ကျွန်မခင်ပွန်း မြန်မာပြည်ကနေ ရောက်လာပါတယ်။ ဒီမှာ တစ်လနေဖို့အတွက် တစ်နှစ်လောက် စိတ်မောလူမော ကြိုးစားခဲ့ရရှာသူကို ကျွန်မနဲ့ဇင်းမယ်က မြန်မာ မိတ်ဆွေတွေက ဧည့်ဝတ်ကျေအောင် ဂရုစိုက်ရတော့တာပေါ့။ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ အမေရိကားကနေတောင် တကူးတက လာရောက်ပူးပေါင်း ဧည့်ဝတ်ကျေသူ တစ်ယောက်က ကျွန်မတို့ ဇနီးမောင်နှံရဲ့ အချစ်ခင်ဆုံး မိတ်ဆွေ Alfred ခေါ် ကိုရဲလင်းနဲ့ ချစ်ညီမလေး သီ တို့ ဇနီးမောင်နှံပေါ့။ ပျော်ရွှင်နောက်ပြောင်တတ်တဲ့ Alfred က “ဆရာတိုးဟာ သိပ် ကံကောင်းတဲ့သူပဲ၊ အမေရိကန်ဂိုက် (American Guide) နဲ့တောင် ထိုင်းနိုင်ငံကို လည်နိုင်တယ်နော်” တဲ့။ ခရီးသွားဝါသနာပါတဲ့ Alfred က ထိုင်းကို အလွန်ကျွမ်းပြီး ထိုင်းစကားလည်း တတ်တယ်။
ကျွန်မ ခင်ပွန်းရောက်တဲ့ညက ဇင်းမယ်ရဲ့ အစားအသောက်ပွဲတော် (Food Festival) စတင်တဲ့ည ပေါ့။ ကျွန်မတို့နေတဲ့ လမ်းတွေရဲ့ တောင်ဘက်ခြမ်းမှာ ကွင်းပြင်ကျယ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒီကွင်းပြင် ကျယ်ကြီးရဲ့ထိပ်မှာ အမြဲတမ်း အခိုင်အခန့် ဆောက်ထားတဲ့ စင်မြင့်အကြီးကြီးတစ်ခုလည်းရှိတယ်။ ပွဲလမ်း သဘင်အတွက် တမင်ထားတဲ့ ကွင်းကြီးလို့ပဲ ကျွန်မထင်တယ်။ ပွဲတော်တော်များဟာ အဲဒီကွင်းထဲမှာပဲ ကျင်းပပြီး အသေဆောက်ထားတဲ့ စင်ြ့မင့်ကြီးပေါ်မှာ ဆိုကြ၊ တီးကြ၊ ကကြတော့တာပဲ။ အစားအသောက် ပွဲတော်က တကယ့်ကို အစားအသောက်တွေချည်း ရောင်းတဲ့ပွဲပါ။ အစားအသောက်မှန်သမျှ တစ်နေရာထဲ မှာ အကုန်ရနိုင်ပြီး ဈေးကလည်းနည်းနည်းလျှော့ပေးထားတယ်လေ။ ကျွန်မတို့ မြန်မာတွေလိုပဲ ပွဲလမ်းသဘင် ကြိုက်တတ်တဲ့ ထိုင်းလူမျိုးတွေနဲ့ ပွဲကတော့ ကြိတ်ကြိတ်တိုးပါပဲ။ ဆို၊ တီး၊ က လုပ်နေတဲ့ စင်မြင့်ရှေ့မှာ စားပွဲဝိုင်းတွေနဲ့ ကုလားထိုင်တွေ အများကြီးခင်းထားတယ်။ ကိုယ်စားချင်တာကို ဆိုင်ခန်းတွေ ကနေ တစ်ခါသုံး Box လေးတွေနဲ့ ၀ယ်ထည့်လာပြီး ကွင်းလယ်က စားပွဲဝိုင်းတွေမှာ ထိုင်စားကြပါတယ်။ ပွဲ ကြည့်ရင်းပေါ့။ စားပွဲဝိုင်းများရဲ့ အနီးကပ်ဆုံးနေရာမှာ ထိုင်းဘီယာချန်း ကောင်တာကလည်း ဟီးလို့ဆိုတော့ အဆင်ကိုပြေနေတာပေါ့။
ဘီယာကြိုက်တဲ့ Alfred နဲ့ ကျွန်မခင်ပွန်းက ဘီယာချန်းနဲ့ အနီးဆုံးစားပွဲကိုရအောင် နေရာဦးကြ တယ်။ ကျွန်မနဲ့သီက အစားအသောက် သွားဝယ်ကြတယ။် ထိုင်းထုံစံ၊ အကင်ဆိုင်များစွာထဲက ငါးကင်၊ ကြက်ကင်နဲ့ အာလူးကင်တွေ ၀ယ်လာပြီး စားကြ၊ စကားများကြတော့တာပေါ့။ စကားအများဆုံး သူကတော့ ကျွန်မပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ ချစ်ခင်သူတွေနဲ့ ကျွန်မ ဒီလိုမနေရတာ ကြာလှပြီလေ။
ကျွန်မတို့နဲ့ အပြိုင်စားသောက်ရယ်မော၊ စကားများနေတဲ့ ဘေးဝိုင်းက ထိုင်းမိသားစုက ကျွန်မတို့ ကို အရှုံးပေးပြီး စားပွဲဝိုင်းက ထတော့ ကျွန်မခင်ပွန်းက “အစားအသောက်ကတော့ တို့က ရှုံးပါတယ်” တဲ့ …။ ဟုတ်ပါရဲ့၊ မိသားစု ခြောက်ယောက်စားထားတဲ့ Box တွေနဲ့ စားကြွင်းစားကျန်တွေက မြင်မကောင်းဘူး။ ကျွန်မတို့လေးယောက် ရယ်မောလိုက်ကြတုန်းမှာပဲ မိသားစုဟာ စားပွဲဝိုင်း သန့်ရှင်းရေးကို တစ်ယောက် တစ်လက် ၀ိုင်းလုပ်လိုက်တာကို မြင်လိုက်ကြရတယ်။ မြန်မာပြည်သား ကျွန်မခင်ပွန်းငြိမ်သွားပြီး ထိုင်းမိသားစု Box တွေထဲကို စားကြွင်း စားကျန်တွေထည့် ကလေးတွေက ခပ်လှမ်းလှမ်းက အဖုံးပါတဲ့ အမှိုက်ပုံးကြီးတွေ ထဲမှာသွားထည၊့် လူကြီးတွေက စားသောက်ဆိုင်တွေက ယူလာခဲ့တဲ့ လက်သုတ်တစ်သျှူးကြမ်းတွေနဲ့ စားပွဲ ၀ိုင်းကို သုတ်သင်သန့်ရှင်းနေတာကို မျက်တောင်မခပ်စတမ်း ကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို “သူတို့ ဘယ်တုန်းက အဲလောက် ယဉ်ကျေးသွားကြတာလဲဟင်” တဲ့ … ။ “ဘယ် ” သိမှာလဲဆိုတဲ့ ကျွန်မရဲ့ လူမိုက် စကားကို သူမတုန့်ပြန်နိုင်ဘဲ ခေါင်းကိုပဲ တဆတ်ဆတ်ငြိမ့်တယ်။
“အေးပေါ့၊ ဟုတ်တာပေ့ါ၊ ဒီလောက်များတဲ့ လူအုပ်ကြီးအတွက် ဘယ်လို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးနိုင် မှာလဲ၊ အင်မတန်ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ အင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စည်းကမ်းလိုက်နာမှုပဲ၊ အတုယူသင့် တယ်။”
Alfred လုပ်သလို အမေရိကန်စတိုင် လက်နှစ်ဖက်ဖြန့်၊ ပခုံးတွန့် ပြရုံကလွဲလို့ ဘာများတတ်နိုင်မှာ တဲ့လဲ …။
အဲဒီအစားအသောက်ပွဲတော်က စပြီး နောက်ရက်တွေ၊ နောက်ရက်တွေမှာ တောင်ပေါ်ဘုရား ဒွိုင် ဆူထက်၊ ဇင်းမယ်ရဲ့ နာမည်ကျော် (Night Bazzar)၊ စန့်ထန်း၊ Airport Palaza, Sunday Walk စတာ၊ စတာတွေဆီကို ကျွန်မခင်ပွန်းခမျာ ကျွန်မတို့ ခေါ်သမျှနောက် တကောက်ကောက် လိုက်ရရှာတော့တယ်။ သူ ခဏခဏ ပြန်သွားချင်တဲ့နေရာဟာ တောင်ပေါ်ဘုရား ဒွိုင်ဆူထက်နဲ့ စန်ထန်းက “လားနား” ဂီတနဲ့ စားသောက်ဆိုင် ကလေးတဲ့။ ဇင်းမယ်တက္ကသိုလ်ကိုတော့ ကျွန်မနဲ့ နှစ်ခေါက်လိုက်ပြီး သူပြန်မသွားချင်တဲ့ နေရာတဲ့၊ တက္ကသိုလ်ဆရာလေ …၊ ဒါလောက်တော့ ရှိမှာပေါ့။
တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူပြန်ရမယ့် အချိန်လည်း နီးလာလို့ ဇင်းမယ်ပတ်ဝန်းကျင်က မြိုကလေးတွေဆီ ကို လည်ပတ်ဖုိ့ ကျွန်မက အစီအစဉ်ရေးဆွဲတုန်းမှာပဲ အခါမဲ့ မိုးက အကြီးအကျယ် ရွာပါတော့တယ်။
အုံ့ဆိုင်းမှုံမှိုင်းပြီး မိုးတွေက တသဲသဲရွာနေတဲ့ တစ်ညနေမှာ ဖုန်းမဆက် ဘာမဆက်နဲ့ တံခါးကို အဆက်မပြတ် တဒေါက်ဒေါက် လာခေါက်လို့ သွားဖွင့်လိုက်တော့ … ဘယ်သူတွေ မှတ်လဲ …။
သံပြိုင်အော်လိုက်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ သားသမီးသုံးကောင်။ ကြွက်စုတ်လေးတွေလို မိုးရေတွေရွှဲလို့။ လူမျောက် (ခေါ်) မောင်ရဲတိုက်၊ သမီး “မြတ်” နဲ့ သမီး “သက်”။
“လာခဲ့စမ်း ဘယ်တွေလျှောက်သွားနေကြတာလဲ၊ ပြောစမ်း”
“အောင်မာ၊ အမေကဖြင့် သားတို့ကို ပစ်ထားပြီးတော့ ..”
လူမျောက် နားရွက်ကို လိမ်ဆွဲပြီး ကျွန်မက ရယ်မောရတယ်။ ဒီသုံးကောင်က တစ်ချိန်လုံး ကျွန်မနဲ့ တတွဲတွဲသွားနေကျလေ …။
“မေနု … နက်ဖြန်ည ‘ပင်းမြစ်’ ထဲက မော်တော်ပေါ်မှာ ဒင်နာစားဖို့ …”
“အိုး၊ လိမ္မာလိုက်တဲ့ ကလေးတွေပါလား၊ အဲဒါကို ကြံစည်နေတာနဲ့ အတော်ပဲပေါ့ …”
“ဟိုး … နေဦး၊ အဲဒါက ရိုးရိုးမဟုတ်ဘူးလေ၊ မနက်ဖြန်က ဆရာ့အတွက် ကြုံတောင့်ကြုံခဲ၊ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲလေ …”
“ဟင် … ဟုတ်လား၊ မသိဘူးတော့ …”
“အမေ ဘယ်သိမလဲ၊ မနှစ်က ‘လွိုင်ကထုံ’ မှာ အမေ ရန်ကုန်ပြန်နေတာကို …”
“ဟုတ်တယ်၊ တစ်ခါမှ မကြုံသေးဘူး၊ ‘လွိုင်ကထုံ’ ဆိုတာ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲကို ခေါ်တာလား၊ ဟုတ်လား သား”
“ဟုတ်တယ်လေ အမေရဲ့ …”
“ ‘လွိုင်ကထုံ’ က မြစ်ထဲမှာ လုပ်တာလား ဟုတ်လား …”
“ဟုတ်တယ်၊ မြစ်ထဲမှာ အလှပြယာဉ်တွေလည်း လှည့်ကြတယ်၊ ဆီမီးတွေလည်း မျှောတယ်၊ ဟို … အလှပြယာဉ်တွေက သားတို့ သက်ြန်အလှပြယာဉ်တွေလိုပဲ”
“ဟင် နက်ဖန် မိုးတိတ်မှ ဖြစ်မယ်နော် … နို့မို့ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ”
“လွိုင်ကထုံ” ကို မကြုံဖူးဘူးသူသမီး သက် က ပွဲပျက်မှာကို ပူပန်နေတယ်။ သမီး ‘မြတ်’ ကတော့ အပိုင်ပဲ။
‘မိုးက လုံးဝတိတ်မှာ၊ မပူနဲ့၊ သူတို့လည်း ငါတို့လိုပဲ မိုးလွှဲတာတွေ ဘာတွေ လုပ်တယ်ဟဲ့ …’
ကျွန်မခင်ပွန်းကတော့ သူတို့ သုံးကောင်နဲ့ ကျွန်မကို ပြုံးကြည့်နေတယ်။
“ကဲ … ဆရာ … နက်ဖြန်ညနေ ခြောက်နာရီ သမီးတို့ လာခေါ်မယ်နော် မော်တော်က ခုနစ်နာရီ စထွက်မှာ …”
“အေးပါဗျာ၊ အေးပါဗျာ ၊ စောင့်နေပါ့မယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…”
အဲဒီမှာတင် ကျွန်မသား မောင်လူမျောက်က မျက်နှာခပ်တည်တည်နဲ့ … ၀င်ချလာတယ်။
“တစ်ခုတော့ ရှိတယ်နော် အမေ ….၊ ‘လွိုင်ကထုံ’ ဆိုရင် အဲဒီမှာ အမြဲတမ်း တိုက်ပွဲဖြစ်တယ် … သိလား၊ နှစ်တိုင်း ဖြစ်တယ်”
“ဘာ … တိုက်ပွဲ ….၊ ဘာတိုက်ပွဲလဲ …”
“အမေကလည်း တိုက်ပွဲပါဆိုမှ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် သေနတ်တွေ၊ ဗုံးတွေ၊ လောင်ချာတွေနဲ့ တိုက် တဲ့ တိုက်ပွဲပေါ့၊ သားတို့ အမြဲပြေးရတာ …”
“ကိုရဲနော် …. ဘာတွေ လျှောက်ပြောနေတာလဲ”
ကျွန်မနဲ့ သမီး ‘သက်’ ကို မောင်လူမျောက်ကတော့ အတည်ပေါက် မျက်နှာထားနဲ့ပါပဲ၊ အမယ် သမီး ‘မြတ်’ ကလည်း မျက်နှာသေလေးနဲ့ မျက်လုံးလေး ၀ိုင်းလို့။
“ကဲပါ .. ကဲပါ … မယုံရင် နက်ဖြန် ကျရင် အမေတို့ သိမှာပေါ့ …”
မောင်လူမျောက်တို့ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း လုပ်ချလိုက်ပြန်ပါပြီ။
ဒီတစ်ခါတော့ မောင်လူမျောက်ရဲ့ စကားဟာ မှန်ရှာပါတယ်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ထိုင်းသုံးဘီး ‘တုတ်တုတ်’ ၊ ‘ပင်းမြစ်’ တံတားနား နီးလာတာနဲ့ တိုက်ပွဲသံကို ကြားရပါ ပြီ ….။ တိုက်ပွဲက ဖြစ်နေပါပြီ။
“အမေရေ .. ၊ တိုက်ပွဲက ပြင်းတယ်ဗျို့ …”
လူမျောက် အော်သလိုပဲ အမှန်တကယ် တိုက်ပွဲက ပြင်းထန်လှပါတယ်။ သေနတ်သံ၊ ဗုံးသံ၊ လောင်ချာသံ၊ လက်နက်ကြီးသံတွေဟာ ပင်းမြစ်တစ်ဝိုက်ကို ဖုံးလွှမ်းထားပါတယ်။ ဘုရား ဘုရား တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာပါ။
“တကယ့်ကို ကြောက်စရာပါပဲလား …”
“ဟုတ်ပါရဲ့ အန်ကယ်၊ ‘သက်’ ဖြင့် ဒီလောက်ကောင်းတဲ့ ‘ဗျောက်’ တွေကို တစ်ခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး”
သမီး ‘သက်’ ပြောသလို တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာ ‘ဗျောက်အိုးသံ’ တွေပါ။
“ကဲ … အမေ သားပြောတာ ယုံပြီမဟုတ်လား … ဟဲ ဟဲ၊ ဒါမြစ်ဟိုဘက်ကမ်းနဲ့ ဒီဘက်ကမ်း တိုက်ပွဲဖြစ်နေတာလေ …၊ ဒီတိုက်ပွဲအတွက် မိဘတွေ ကိုယ်တိုင်က သားသမီးတွေကို သေချာပြင်ဆင်ပေး တာ၊ ‘လွိုင်ကထုံ’ မတိုင်ခင် တစ်ပတ်လောက်ကတည်းက ကောင်းပေ့၊ မြည်ပေ့ ဆိုတဲ့ ဗျောက်အိုးတွေကို ရှာပေးထားတာ၊ ဟဲဟဲ သားတော့ သိပ်ပျော်တာပဲ၊ သားတို့ မော်တော်က တိုက်ပွဲကြားက ဖြတ်ရမှာနော … မလွယ်ဘူး”
“အို … ကိုရဲကလဲ … ဒါဆိုရင် ကိုယ့်မှာလည်း ကာကွယ်ဖို့ လက်နက်ရှိရမှာပေါ့၊ သက်ကတော့ ပြန်ပစ်မှာပဲ …”
“ဝယ်ပေးမယ်၊ ၀ယ်ပေးမယ်၊ ဟောဟိုမှာ ကြည့်၊ လက်နက်ဆိုင်တွေမှ တပုံကြီးရယ်၊ လွတ်လပ်စွာ ၀ယ်လို့ရတယ်”
အိုး … ဟုတ်ပါရဲ့၊ သမီး ‘မြတ်’ လှမ်းပြတဲ့ဆီကို ကြည့်လိုက်တော့ မြစ်ဘေးဝဲယာမှာ ခုံလေးတွေ ပေါ်တင်ရောင်းနေတဲ့ သေနတ်တွေ၊ ဗုံးတွေ၊ လောင်ချာတွေ …၊ ပြီးတော့ Ready made မီးမျှောစရာလေး တွေကလည်း လှမှလှပါပဲ။ လူတွေကလည်း ကြိတ်ကြိတ်တိုးပါပဲ။
မော်တော်ပေါ်မှာ သမီး ‘မြတ်’ ရဲ့ အစွမ်းကြောင့် ကျွန်မတို့ စားပွဲက မော်တော်ဦးပိုင်းမှာ ရတယ်။ ကျွန်မက ဒီ ‘ပင်းမြစ်’ ထဲမှာ မော်တော်ခုတ်မောင်းပြီး ဖယောင်းတိုင် ညစာ စားရတဲ့ အရသာကို အလွန် သဘောကျတယ်။ မော်တော်လေးက ခပ်သေးသေးပါပဲ။ ရှေ့ဦးပိုင်းနဲ့၊ ပဲ့ပိုင်းစားပွဲခုံ ခြောက်ခုံလောက်ပဲ ဆန့်မယ်။ တစ်ဝိုင်းကို လေးငါးယောက်ပဲ ၀ိုင်းနိုင်တယ်။ ကိုယ်ထိုင်တဲ့ ကုလားထိုင်နဲ့ မော်တော်ဘောင်နဲ့က တညီတည်းဆိုတော့ ရေနဲ့ နီးနီးလေးပေါ့။ မော်တော်ဘေး အကာအကွယ်တွေကလည်း ဖွင့်ထားတော့ စားရင်းသောက်ရင်း မြစ်ပြင်ရှုခင်း၊ မြစ်ဘေးဝဲယာ ရှုခင်းကို ကြည့်လို့ရတယ်။ အစားသောက်တွေကို မော်တော်မထွက်ခင်မှာရတယ်။ မော်တော်ပေါ်မှာ ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်မပေးဘူး။ ဘီယာနဲ့ အချိုရည်၊ ရေခဲ လောက်ပဲ ရတယ်။
“မေနုရေ၊ သက်ကြောက်တယ်။ ရေပြင်ဘက်မှာ မေနုနဲ့ အန်ကယ်ထိုင်ပေး …၊ သက်အတွင်းထဲမှာ ထိုင်မယ် …”
“ကောင်မလေး … ဘာခုမှ ကြောက်ပါပြီလဲ”
သက်ပြောတာမှန်တယ်၊ မော်တော်စထွက်တော့မှ ပိုကြောက်စရာ ကောင်းလာတယ်။ ရေပြင်ကို လာပြီးထိတဲ့ ‘ရွှီ’ ‘ဒိုင်း’ ဆိုတဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ် အသံဟာ နားကို အူသွားတာပဲ …။ မော်တော်ပေါ်က နိုင်ငံခြားသား ဧည့်သည်တွေကတော့ ပျော်သလား မမေးနဲ့။ အထူးအဆန်းဖြစ်၊ သဘောတွေ ကျပြီး မော်တော်ဘောင်ပေါ်မှာ တက်ထိုင်ကြည့်ကြတော့တယ်။ အဲဒီထဲမှာ ဗျောက်စက္ကူလိပ်တွေ တကားကားနဲ့ ကျွန်မသား မောင်လူမျောက်လည်း ပါတာပေါ့။
ကျွန်မနဲ့ သမီးမြတ်က ၀ယ်လာတဲ့ ဆီးမီးမျှောစရာ ကြာခွက်လေးတွေထဲမှာ သူတို့ထုံးစံအတိုင်း ‘ဆယ်ဘတ်စေ့’ လေးတွေထည့်ပြီး ရေထဲမှာ မျှောကြတယ်။
ဆီမီးကြာခွက်လေးတွေထဲမှာ ပိုက်ဆံထည့်တာက နောင်နှစ်၊ နောင်နှစ်တွေမှာ ဥစ္စာပစ္စည်း ပေါများ အောင်လို့တဲ့ … ။ မြစ်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာ ဆီမီးကြာခွက်လေးတွေက တလက်လက်၊ တရွေ့ရွေ့ မျောပါလို့။ ဆီမီး လက်လက်လေးတွေပေါ်ကို ဗျောက်ကျည်ဆံမိုးတွေကလည်း တဖောက်ဖောက် အဆက်မပြတ် ရွာသွန်းလို့ …။
“အမေတို့ ….သတိထားနော်။ တံတားနား ရောက်တော့မယ်၊ ဟိုမှာ ဟိုမှာ၊ အမေ၊ ကြည့်၊ ကြည့် အမေတို့ကို စောင့်နေပြီ …”
အလို၊ ဘုရား၊ ဘုရား ဟုတ်ပါရဲ့ ပင်းမြစ်ကို ဖြတ်တဲ့ တံတားကြီးပေါ်ကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တံတားပေါ်မှာ လူတွေဟာ ကြပ်ခဲလို့၊ သူတို့လက်ထဲမှာ ဗျောက်ဗုံးတွေကိုယ်စီနဲ့၊ တံတားအောက်က ဖြတ်တဲ့ မော်တော်တွေကို ဗုံးကြဲကြမှာလေ။
“ဟော … အမေ၊ အမေ၊ ဟိုမှာကြည့်၊ ဟိုကျလာတဲ့ ဗုံးကို ကြည့်စမ်း”
ကျွန်မတို့ရှေ့က မော်တော်တစ်စင်းပေါ်ကို ညာသံပေးပြီး ပစ်ချလိုက်တဲ့ ဗုံးတစ်လုံးကို လူမျောက် က ပြတယ်။
“ဟာ … ကြောက်စရာပဲ”
ကျွန်မခင်ပွန်းက တအံ့တသြ အော်တယ်၊ ကြည့်ပါဦး၊ သူက ရေမြှုပ်ဗုံးများကျလို့ …။ ရေထဲကျသွား ပြီး ရေပေါ်မှာ မီးပန်းတွေ လူတစ်ရပ်လောက်ထိ ဖြာထွက်ပြီး ပတ်ချာလည်နေလိုက်တာ၊ လှတောင်လှနေ သေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ‘အုန်း’ ခနဲဆို ပေါက်တယ်။ “တော်တော်ကောင်းတဲ့ ဗုံးပဲကွ” လို့ ကျွန်မခင်ပွန်းက ချီးကျူးလိုက်တုန်းမှာပဲ ကျွန်မတို့ မော်တော်ဟာ တံတားအောက်ကို ဖြတ်ပါတော့တယ်။
“ဒိုင်း … ဒိုင်း၊ အုံး၊ ရွှီး … ဒိုင်း”
“အောင်မယ်လေးဗျ၊ အမေရေ … လာပြီဗျို့ …”
“ခေါင်းငုံ့၊ ခေါင်းငုံ့၊ နားပိတ်”
ကျွန်မတို့အားလုံး မျက်လုံးတွေမှိတ်၊ နားတွေပိတ်ထားလိုက်ကြတယ်။ ဒီခံစားမှုဟာ ဘာနဲ့တူလဲ ဆိုတော့ သင်္ကြန်မှာ ရေပက်ခံထွက်တဲ့အခါ မီးသတ်ပိုက်နဲ့ ထိုးမယ့် မဏ္ဍပ်ကို ဖြတ်သန်းရတော့မယ့် ခံစားမှု နဲ့ တူတယ်။ ကျွန်မတို့ မော်တော်ဦးပိုင်း ရေထဲကို ဗုံးတွေက တဝုံးဝုံး ကျလာသံကို ကြားရပြီးတဲ့ ခဏမှာ တော့ ကျွန်မကျောပြင်ဟာ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဖြစ်သွားပြီး ကျောပြင်တစ်ခုလုံး ရေတွေ စိုစိုရွှဲသွားတော့တယ်။
“ဟာ … တို့နှစ်ယောက်ကို မှန်ပြီဟေ့ …”
ကျွန်မ ခင်ပွန်းလည်း ရေတွေရွှဲရွှဲစိုလို့ …။ ဟိုသုံးကောင်က ကျွန်မတိုို့ ကြည့်ပြီး တဟားဟား ရယ်ကြတယ် …။
“မြန်မာ့သွေးကို ပြမယ့်ကောင်က အော်လိုက်တာ အမေရေ၊ အမေရေနဲ့”
တံတားအောက်က မော်တော်ဖြတ်ပြီးပါမှပဲ ကျွန်မဖြင့် အသက်ရှူနိုင်တော့တယ်။ ဒါပေမဲ့ မော်တော် ကတော့ မြစ်ကမ်းနဖူးနှစ်ဖက်က ကျည်ဆံတွေ၊ လောင်ချာတွေကြားမှာ ဆက်ပြီး ဖြတ်သန်းရဦးမှာ။ ကမ်းပေါ်မှာ ပျော်ရွှင်ခုန်ပေါက်ပြီး လက်နက်ကြီးပစ်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေလေ ..။ လှမ်းမြင်နေရတယ်။ တော်သေးရဲ့ …။ ရဲမော်တော်လေးတွေ …၊ လုံခြုံရေး မော်တော်လေးတွေ၊ မြစ်ထဲမှာ လှည့်ပြီး စောင့်ရှောက် နေတာ မြင်ရတယ်။ သူတို့ကလည်း ပျော်လို့၊ ဟော … ကြည့်ပါဦး … မြစ်ကမ်းဘေးက လောင်ချာတစ်လုံး က ရဲမော်တော်ကို တည့်တည့်ထိတာပဲ။ ရေပန်းတွေဖြာသွားပြီး ရဲမော်တော်က လုံခြုံရေးတွေ ရေတွေရွှဲပြီး တဟားဟားနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မောင်းသွားကြတယ်။ ဆီမီးလက်လက်တွေ ကြားထဲမှာ ဝေါခနဲ မောင်းသွား တဲ့ ရဲမော်တော်ကို လိုက်ကြည့်နေရင်း ကျွန်မ မျက်စိထဲမှာ ဆီမီးခွက်တွေဘေးက ငုပ်ချည်ပေါ်ချည် လူခေါင်းလေးတစ်ခုကို မြင်လိုက်ရသလိုပဲ။ ကိုယ့်မျက်စိကို စိတ်မချတဲ့ ကျွန်မကို မျက်မှန်တပ်ထားတဲ့ ကျွန်မ ခင်ပွန်းက အတည်ပြုတယ်။
“ဟုတ်တယ်ဦး၊ အဲဒါ … ဆီမီးခွက် လိုက်ဆယ်တဲ့ သူတွေလေ၊ ဆီမီးခွက်ထဲက ပိုက်ဆံလေးတွေကို နှိုက်ယူကြတာ”
“ဟိုမှာ လှေကလေးတွေနဲ့ သူတို့ကို စောင့်တဲ့သူက စောင့်လို့ …”
“အမေရေ … ဝတ္ထုတွေဗျ … သိလား၊ ဆီမီးခွက်ထဲက ပိုက်ဆံလိုက်ဆယ်ရင်း ရေနစ်သေတဲ့ ကလေးတွေ နှစ်တိုင်းပဲဗျ”
ကျွန်မမြင်ရပါပြီ။ မော်တော်နဲ့ မလှမ်းမကမ်းက ရေပေါ်မှာ တဖူးဖူး အသက်ရှူထုတ်ရင်း ဆီမီးခွက် ထဲက ပိုက်ဆံကို ရှာဖွေနေတဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်။ လှပပျော်ရွှင်ဖွယ် ‘လွိုင်ကထုံ’ ရှုခင်းထဲက ဒီမြင်ကွင်း အစိတ်အပိုင်းလေးဟာ အလွန်ပဲ အကျည်းတန်လှပြီး ကျွန်မရင်ကို နာကျင်စေပါတယ်။
“ဟာ … မော်တော်ကလည်း …. အဲဒီကလေးလေးနားက ဖြတ်ပါ … သက် …. ပိုက်ဆံပေးချင်လို့ ပါ သက် အဲဒီကလေးလေးကို ပိုက်ဆံပေးချင်တယ်”
သမီး ‘သက်’ က တတွတ်တွတ် ရေရွတ်ပေမဲ့ မော်တော်က ပိုက်ဆံဆယ်သူများနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဝေးကွာခဲ့ပြီ။ သေနတ်သံ၊ ဗုံးသံတွေကတော့ ဆူညံတုန်း …။
မော်တော်ပြန်အကွေ့မှာ ဗုံးကြဲသူများရဲ့ တံတားအောက်ကို ကျွန်မတို့တွေ တစ်ခါပြန်ဝင်ကြရပြီး မော်တော်ကမ်းကို ကပ်လို့ ကမ်းပေါ် ရောက်တာနဲ့ ဟိုရေမြှုပ်ဗုံးဆိုင်နဲ့ တည့်တည့်တိုးတော့တာပါပဲ …။ ကျွန်မသား မောင်လူမျောက်လေ … ခုန်ဆွ၊ ခုန်ဆွနဲ့ … ၀ယ်မယ်၊ ၀ယ်မယ် လုပ်တော့တာပဲ။ ဈေးသည်က မြေပြင်ပေါ်မှာ စမ်းပြတယ်။ ရေထဲမှာလိုပဲ မီးပန်းတွေက လူတစ်ရပ်လောက် ချာချာလည်အောင် ပန်းပြီးမှ “အုန်း” ခနဲ ပေါက်တယ်။ မြေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ အဲဒီအိုးက ကွဲလည်းမကွဲဘူး။ ဈေးကလည်း ပေါလိုက်တာ ၁၀ ဘတ်တဲ့ ….။
မကြီးမငယ်နဲ့ ကျွန်မခင်ပွန်းက အဲဒီ ဗုံးနှစ်လုံး ၀ယ်တယ်လေ။ ကျွန်မက အမှတ်တရ ၀ယ်တယ် မှတ်တာ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ သူက အိမ်နီးနားချင်း ချာတိတ်တွေအတွက် အ၀တ်အစား သေတ္တာထဲမှာ အလေးခံပြီးတော့ကို ရန်ကုန်ထိ သယ်ဆောင်သွားတော့တာ …။
နောင်နှစ် နိုဝင်ဘာ တန်ဆောင်တိုင်ညမှာတော့ ကျွန်မဟာ ကိုယ့်မြေကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်ယာမှာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပေါ့။ အိမ်ရှေ့ ၀ရံတာမှာ မီးပုံးတွေ ထွန်းညှိရင်း အိမ်နီးနားချင်း ကလေးတစ်သိုက်နဲ့ ဆူညံလို့ပေါ့။
“အန်တီနုရေ မုန့်ဖိုးပေးပါ၊ ဘဘတိုးရေ မုန့်ဖိုးပေးပါ”
မီးပုံးကို မီးမလောင်ဘဲ ဖယောင်းတိုင်ထွန်းနိုင်တဲ့သူကို မုန့်ဖိုးပေးမယ်လို့ ကျွန်မက ပြောထားလို့ အလွန်လည်းကဲ၊ အလွန်လည်၊ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မောင်စွမ်းပြည့် ဆိုတဲ့ ကောင်က ဦးဆောင်အော်နေ တာလေ။ သူ့ “ဘဘတိုး” က “အေးပါကွာ” ဆိုပြီး သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ကို ဖွင့်ရင်းနဲ့ ကျွန်မကို လှမ်းပြောတယ်။
“ဟေး … လွိုင်ကထုံကို သတိမရဘူးလား …”
“အင်း … ရတယ်”
ကျွန်မက ခေါင်းညိတ်ရင်းနဲ့ လွိုင်ကထုံ တိုက်ပွဲကို မြင်ယောင်လာတယ်။ ပြီးတော့ ဖျတ်ခနဲ သတိရ သွားတယ်။
“ဟေ့ကောင် မောင်စွမ်းပြည့်၊ မနှစ်က မင်းဘဘတိုးပေးတဲ့ ရေမြှုပ်ဗုံးမိုက်တယ် မဟုတ်လား။ အကျယ်ကြီး မြည်တာနော် …”
အင်မတန် အာသွက်တဲ့ မောင်စွမ်းပြည့်က ကျွန်မကို ချက်ချင်းမဖြေဘူး။ ပြီးတော့မှ နှုတ်ခမ်းစူတူတူ နဲ့ “သားဘယ်လိုလုပ် သိမှာလဲ” တဲ့ …။
“ဟောတော် .. ဘာပြုလို့လဲ၊ ဘာလုိ့ မသိရတာလဲ၊ အဲဒီဟာက မမြည်ဘူးလား”
“ဟာ … အန်တီနုကလဲ …”
ရွှေကိုယ်တော်လေးက “လာ … လိုက်ခဲ့”တဲ့။ မပြောမဆိုနဲ့ ကျွန်မလက်ကိုဆွဲ အပေါ်ထပ်က သူတို့ တိုက်ခန်းဆီကို … ပြီးတော့ သူတို့မိသားစုအိပ်တဲ့ ခုတင်အောက်၊ ခုတင်အောက်က ဂျပ်သေတ္တာပုံးထဲက အ၀တ်စုတ်တွေကြားမှာ …။ ကျွန်မကို အသံတိတ် မေးငေါ့ပြတယ်။ သူလုံခြုံစွာ အထပ်ထပ် ဖွက်ထားတဲ့ ဗျောက်အိုးလေးနှစ်လုံးက ငြိမ်ငြိမ်လေး ကျွန်မကို ကြည့်နေတယ်။ ကလေးကို ကျွန်မ ဘာပြောရမလဲ၊ အလျင်အမြန် ဦးနှောက်ကို အလုပ်ပေးတုန်းမှာပဲ ရုတ်တရက် ကျွန်မနားထဲမှာ ဆူညံသံတွေ …၊ အော်ဟစ် သံတွေ … ပြီးတော့ ရယ်မောသံတွေ ….။
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ကလျာမဂ္ဂဇင်း